Apple wuxuu dib u bilaabayaa watchOS 5 Beta 1 | Wararka IPhone
Toddobaad ka dib markii Apple ay soo bandhigtay cusbooneysiinta mustaqbalka ee Apple Watch oo ay soo saartay Beta-kii ugu horreeyay, shirkaddu waxay go'aansatay inay mar labaad soo bandhigto B Beta-dii ugu horreysay. Nooc cusub oo la cusbooneysiiyay oo ah nooca horu dhaca ah ee ugu horreeya oo hadda loo heli karo soo dejin laga bilaabo codsiga iPhone.
Ka dib markii ugu horeysay ee la bilaabay, Apple waa inay ka noqotaa tan koowaad ee Beta si ay u xalliso dhibaatooyinka qaarkood ee ka hortagay rakibidda nooca cusub ee adeegsadayaal badan oo leh shilal dhammaadka hawsha. Cusbooneysiintan cusub ee Beta 1 waxay ballanqaadaysaa inay hagaajineyso dhibaatooyinkaas ugu dambayntiina waxaan ku raaxeysan doonnaa habka ugu horreeya ee warkiisa.
watchOS 5 waxaa ku jira isbeddelo badan, sida Siri oo leh fursado cusub oo ay ugu wacan tahay suurtagalnimada barnaamijyada saddexaad ee loogu talagalay inay ku daraan kaararkooda, habab cusub oo isboorti oo loogu talagalay codsi hooyo ee Apple Watch sida Yoga ama buurta, ama awoodda Apple Watch inay si otomaatig ah u ogaato dhaqdhaqaaqa Maxaad sameyneysaa haddii aad ilowdo inaad gacanta ku furto. Codsiga asalka ah ee 'Podcasts' ee loogu talagalay Apple Watch, shaqo cusub oo Walkie Talkie ah ama awooda lagula tartamo asxaabta barnaamijka Waxqabadka ayaa ah isbadalada ugu weyn ee noocan cusub, oo waliba ay ku jiraan hagaajinta ogeysiisyada.
WatchOS Beta waxaa heli kara oo keliya horumariyeyaasha, ma laha Beta Dadweynaha, maadaama aysan jirin wax macquul ah oo dib loogu noqon karo nooca markii la rakibo. Tani waxay ka dhigan tahay haddii aad iska diiwaangeliso astaanta horumariyaha oo aad rakibto, fursad uma lihid inaad ka qoomameyso oo waa inaad u dulqaadataa Beta illaa nooca ganaaxa la sii daayo, kaas oo aan ku habboonayn dhammaan noocyada isticmaaleyaasha. Waxaan isku dayi doonaa inaan kaaga warramo wararkeeda ugu horreeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » watchOS » Apple wuxuu dib u bilaabayaa watchOS 5 Beta 1